Seondal: The Man Who Sells the River (2016) | MM Movie Store
ဒီဇာတျကားလေးကတော့ ဂြိုဆှနျးခတျေကို အခွခေံပွီး ရိုကျကူးထားတာပါ။မွနျမာပရိသတျအနနေဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား မငျးသားခြောလေး ယူဆောငျဟို (YooS0ungHo) ရဲ့အောငျမွငျတဲ့ဇာတျကားလေး တဈကားပါ ။
ဒီဇာတျကားမှာ ယူဆောငျဟိုက တရုတျပွညျကို ကြှနျအဖွဈ ရောငျးစားခံရပွီးစဈပှဲမှာ မသခေဲ့ပဲထှကျပွေးလှတျမွောကျလာခဲ့တဲ့ ကငျအီနှနျးအဖွဈ သရုပျဆောငျ ထားပါတယျ….ကငျအီနှနျးက သူနဲ့အတူလှတျမွောကျလာတဲ့တခွား နှဈယောကျရယျပေါငျးပွီးညီအဈကိုလို ခဈြခဈြခငျခငျပြျောရှငျစှာနထေိုငျနကွေတယျ…
သူတို့ရဲ့အသကျမှေးကြောငျးကတော့ လူလိမျတပါတျရိုကျ ရိုကျစားပေါ့ဗြာ…ကငျအီနှနျးရဲ့ ရိုကျစားအကှကျတှကေ လှလှနျးတော့“ မုသားသခငျ”ရယျလို့ဆိုပွီး နာမညျကြျောပေါ့…သူကလညျးအတငျ့ရဲခကျြကမျးကုနျ ဘုရငျ့ဘဏ်ဍာတိုကျတောငျမနရေဘူး ရအောငျဖောကျတယျ ။
ဒါကွောငျ့ ဘုရငျ့တရားရုံးကလညျး အလိုရှိနတေဲ့ ထိပျတနျးလူလိမျလေး။တဈခါမှတော့ ဆောဒယျဆောငျးရဲ့ဆေးရှကျကွီးတှေ ဖြောငျဖို့ကွိုးစားရငျးမအူမလညျသူတို့ရဲ့ညီငယျလေး အသကျပေးသှားရတယျ….
ဆောဒယျယောငျး ဆိုတာကလညျး ဘုရငျ့ဆှတေျောမြိုးတျော ဦးရီးတျော လောဘကွီးသူကိုယျ့အတှကျသာကိုယျကွညျ့ပွီး ဂြိူဆှနျးနိုငျငံသားမြားကို တရုတျသို့ ကြှနျအဖွဈရောငျးစားဆေးရှကျကွီးတှလေုပျနဲ့ တရုတျကိုတော့အသဖေားနတေဲ့လူကွီးပေါ့…
ငှကွေေးအငျအားကလညျးတောငျ့တငျး တရုတျကိုလညျးပိုငျဆိုတော့ဘုရငျကတောငျ မနိုငျလို့ လကျမှိုငျခနြရေတဲ့ လူလညျကွီးမုသားသခငျ ကငျအီနှနျးကလညျး ညီငယျအတှကျ ဆောဒယျယောငျးကိုလကျစားခဖြေို့သူ့ကြှမျးကငျြတဲ့အတတျပညာနဲ့ မွဈကွီးကိုလိမျရောငျးဖို့ ကွံစညျတဲ့အခါတော့မှာတော့မုသားသခငျကပဲ လိမျရောငျးနိုငျမလား
ဘယျလိုလိမျရောငျးကွမလဲမွဈတဈစငျးကို ဝယျခငျြလာအောငျ ဘယျလိုမြားဆှဲဆောငျကွမလဲဆောဒယျယောငျးလို သူမြားကတုံးပျေါ ထိပျကှကျနတေဲ့လူလညျကွီးကရော အညာခံမိမလားအလိမျပျေါသှားလမေလား ဆိုတာကတော့ ဇာတျကားမှာပဲ ဆကျလကျရှုစားကွညျ့ကွပါ….
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ဂျိုဆွန်းခေတ်ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ။မြန်မာပရိသတ်အနေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား မင်းသားချောလေး ယူဆောင်ဟို (YooS0ungHo) ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ဇာတ်ကားလေး တစ်ကားပါ ။
ဒီဇာတ်ကားမှာ ယူဆောင်ဟိုက တရုတ်ပြည်ကို ကျွန်အဖြစ် ရောင်းစားခံရပြီးစစ်ပွဲမှာ မသေခဲ့ပဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ကင်အီနွန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင် ထားပါတယ်….ကင်အီနွန်းက သူနဲ့အတူလွတ်မြောက်လာတဲ့တခြား နှစ်ယောက်ရယ်ပေါင်းပြီးညီအစ်ကိုလို ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ရွင်စွာနေထိုင်နေကြတယ်…
သူတို့ရဲ့အသက်မွေးကျောင်းကတော့ လူလိမ်တပါတ်ရိုက် ရိုက်စားပေါ့ဗျာ…ကင်အီနွန်းရဲ့ ရိုက်စားအကွက်တွေက လှလွန်းတော့“ မုသားသခင်”ရယ်လို့ဆိုပြီး နာမည်ကျော်ပေါ့…သူကလည်းအတင့်ရဲချက်ကမ်းကုန် ဘုရင့်ဘဏ္ဍာတိုက်တောင်မနေရဘူး ရအောင်ဖောက်တယ် ။
ဒါကြောင့် ဘုရင့်တရားရုံးကလည်း အလိုရှိနေတဲ့ ထိပ်တန်းလူလိမ်လေး။တစ်ခါမှတော့ ဆောဒယ်ဆောင်းရဲ့ဆေးရွက်ကြီးတွေ ဖျောင်ဖို့ကြိုးစားရင်းမအူမလည်သူတို့ရဲ့ညီငယ်လေး အသက်ပေးသွားရတယ်….
ဆောဒယ်ယောင်း ဆိုတာကလည်း ဘုရင့်ဆွေတော်မျိုးတော် ဦးရီးတော် လောဘကြီးသူကိုယ့်အတွက်သာကိုယ်ကြည့်ပြီး ဂျိူဆွန်းနိုင်ငံသားများကို တရုတ်သို့ ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားဆေးရွက်ကြီးတွေလုပ်နဲ့ တရုတ်ကိုတော့အသေဖားနေတဲ့လူကြီးပေါ့…
ငွေကြေးအင်အားကလည်းတောင့်တင်း တရုတ်ကိုလည်းပိုင်ဆိုတော့ဘုရင်ကတောင် မနိုင်လို့ လက်မှိုင်ချနေရတဲ့ လူလည်ကြီးမုသားသခင် ကင်အီနွန်းကလည်း ညီငယ်အတွက် ဆောဒယ်ယောင်းကိုလက်စားချေဖို့သူ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အတတ်ပညာနဲ့ မြစ်ကြီးကိုလိမ်ရောင်းဖို့ ကြံစည်တဲ့အခါတော့မှာတော့မုသားသခင်ကပဲ လိမ်ရောင်းနိုင်မလား
ဘယ်လိုလိမ်ရောင်းကြမလဲမြစ်တစ်စင်းကို ဝယ်ချင်လာအောင် ဘယ်လိုများဆွဲဆောင်ကြမလဲဆောဒယ်ယောင်းလို သူများကတုံးပေါ် ထိပ်ကွက်နေတဲ့လူလည်ကြီးကရော အညာခံမိမလားအလိမ်ပေါ်သွားလေမလား ဆိုတာကတော့ ဇာတ်ကားမှာပဲ ဆက်လက်ရှုစားကြည့်ကြပါ….